Myanmar Man’s Diary » cPanel
05.09.10 | |5Comments
The following article is written in Zawgyi-2009 font.
ဒီတစ်ခာတော့ ဝက်ဆိုက် hosting လုပ်ရာမှာ အသုံးများတဲ့ cPanel အကြောင်း ပြောပာ့မယ်။ ဒီနေ့တော့ အကြမ်းဖြင်း Introduction ပော့။ သူက နဲနဲ ပြောစရာ များတော့ အသေးစိတ် feature တစ်ခုချင်းကို နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ပြောပာ့မယ်။ သိပ်ကြောက် မသွားပာနဲ့ဦး။ cPanel က သုံးရတာ အရမ်းကို လွယ်ပာတယ်။
cPanel ဆိုတာ ဘာလဲ။
cPanel ဆိုတာ ကိုယ့် ဝက်ဆိုက်ကို webpage ကတဆင့် ထိန်းချုပ်တဲ့ web interface control panel တစ်ခုပာ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အလုပ်တွေကို သီးသန့် software မလိုပဲ web browser ရှိရုံနဲ့ အလွယ်တစ်ကူ လုပ်နိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ web based application တစ်ခုပာ။
ဒာဆို cPanel ဆိုတာ Blogger interface လိုဟာမျိုးပော့။
သဘောတရားကတော့ တူပာတယ်။ ဒာပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မတူပာဘူး။ Blogger control panel က template ပြောင်းတာ၊ ပိုစ့်အသစ် တင်တာ၊ ပြင်ဆင်တာ လောက်ပဲ လုပ်လို့ ရတာပာ။ cPanel ကတော့ web hosting account တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ် နိုင်ပာတယ်။
ဒာဆို cPanel က ဘာတွေ လုပ်ပေးလဲ။ ဘာတွေ လုပ်လို့ ရလဲ။
Web hosting account နဲ့ ပာတ်သက်တာ တှောတှော များများ လုပ်လို့ ရပာတယ်။ အောက်မှာ အသုံးများတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို list လုပ်ပေးထားပာတယ်။
ဖိုင်များ ဆာဗာပှော တင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ခြင်း။
Folder များ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း။
Zip file များကို ဆာဗာပော်တင်ပြီး folder များ အဖြစ်သို့ ဖြန့်ချခြင်း။
Fantastico ပေးထားလျှင် wordpress, Drupal, Joomla, forum, e-commerce site စတဲ့ content management system တွေကို အှောတိုမက်တစ် တင်ပေးခြင်း။
ဆာဗာပော်ရှိ ဖိုင်တွေကို back up လုပ်ခြင်း၊ backup ကို ပြန်တင်ခြင်း။
SQL database များ ဖန်တီးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း။
CGI script များ တင်ခြင်း။
Website stats များ ကြည့်ခြင်း။
FTP account များ ဖန်တီးခြင်း။
Email account များဖွင့်ခြင်း (yourname@yourdomain.com)၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း။
DNS zone များ ပြုပြင်ခြင်း။
ဒာ့အပြင် ကိုယ့် service provider က ပေးရင် ပေးသလို တစ်ခြား လုပ်ငန်းတွေလဲ လုပ်လို့ ရပာသေးတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ cPanel ဘာလဲဆိုတာ ရေးရေးတော့ သဘောပောက် လောက်ပြီ ထင်ပာတယ်။ အသေးစိတ် ကိုတော့ နောက်မှပဲ တစ်ခုခြင်း ရေးပာ့မယ်။ လက်ဆော့ခြင် သူတွေကတော ဒီ cPanel Demo မှာ လက်တွေ့ လက်ဆော့ နိုင် ကြပာတယ်။
ဝက်ဆိုက် ထောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စား သူတွေကတော့ ကျွန်တှော သုံးနေတဲ့ Host Gator Web hosting မှာ sign up လုပ်နိုင် ကြပာတယ်။
Web hosting basic – disk space and bandwidth အရင် အပါတ်က web hosting service ကို ဘယ်လို ရွေးချယ် ရမလဲ ဆိုတာ...
On 05.13.10 shwemyanmar said:
so good. Nice blog!
On 04.29.11 BlueHope said:
အကိုရေ ကျနော်လဲ Host Gator Web hosting အဲဒီကနေဘဲ ၀ယ်ထားတယ်။ ၀က်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ။ ကျနော် ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ ရွာပတ်နေတုန်း အကိုရဲ့ ပိုစ့်ကို သွားတွေ့ပြီး အခုလို အကူအညီတောင်းလိုက်တာပါဘဲ။ အကို့မေးလ်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဆည်းပူးအကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ။
On 04.30.11 BlueHope said:
အကိုရေ ကျနော် ကွန့်မက်လေး ပျောက်သွားတယ်နော်။ ဒီပိုစ့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချင်တာလေးတွေ ရှိလို့ မိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန့်မက်လေးပါ
အကိုရေ ဒီကွန့်မက်ကိုတော့ မတင်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော် အကူအညီတောင်းထားတာ သိချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော့် အီးမေးလ်က 7blue9@gmail.com ပါ။ အဲဒါ အကြောင်းပြန်ပေးပါအုံး။ တကယ်ကို အခက်အခဲ တွေ့နေလို့ပါ။ ဆိုဒ်တစ်ခု အမြန်ဆုံး ပြီးချင်လို့ပါ။ Template ကို ဘယ်က ယူပြီး ဘယ်နေရာမှာ သွားထည့်ရမလဲ Control Panel ကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို သိချင်တာပါ။ ကူညီပေးပါအုံး။ အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော့် မေးလ်ကို အပ်ပေးပါ။
On 05.23.11 kesoemoe said:
how can dowloands to Tun Yin songs?
« User opinion poll for Zawgyi and Myanmar unicode 5.1
» Blogging from my phone